Firenena aziatika | Vaovao momba ny dia
Goavana izao tontolo izao ary rehefa mikasa ny dia dia ahoana no itiavantsika manam-potoana sy vola hivezivezy mora foana na aiza na aiza! Saingy amin'ny ankapobeny dia tsy azo atao izany, noho izany dia mila mijery sarintany ny olona, ​​manamarina ny vidin'ny sidina ary ny drafitra, ny drafitra, ny drafitra. Inona no hevitrao Asia?
Mino aho fa manana firenena tena mahaliana i Asia hitsidika azy, saingy sarotra be ny manarona azy rehetra amin'ny dia iray satria tena lehibe ny faritra ary misy firenena, toa an'i Chine, izay tontolo ho azy ireo. Ka raha mieritreritra ny handeha ho any Azia aho dia izao no resahina ireo firenena tsara indrindra hitsidika an'i Azia Pasifika.
1 Azia Pasifika
3 Korea Atsimo
Tena malalaka sy miovaova i Azia ary mpizahatany maro no mizara azy io ho vondrona maromaro. Ireo mankafy amoron-dranomasina, fialan-tsasatra ary fialan-tsasatra mora vidy dia misafidy an'i Azia atsimo atsinanana miaraka amin'ireo firenena toa an'i Vietnam, Kambodza, Laos, India. Ireo izay maniry fotodrafitrasa tsara kokoa sy fitaterana tsara kokoa dia mamily ny kompà any amin'ny firenena toa an'i Japon, Korea Atsimo na Sina. Ny anarana tsirairay dia mirakitra kolontsaina, gastrolojia, sari-tany, fiteny ...
Azia Pasifika no antsoinay ampahan'izao tontolo izao izay ao amin'ny Oseana Pasifika na akaiky ary mazàna dia ahitana ny ankamaroan'ny Azia atsimo atsinanana, Oceania ary Azia afovoany. Miovaova izy io, fa noho ny haben'ny habeny rehefa mandeha ny dia mila misafidy.
Ka anio dia hamela an'i Azia atsimo atsinanana rehetra isika mifantoka amin'i Japon, Korea atsimo ary ampahany amin'i Sina.
Ny toerako eto amin'izao tontolo izao dia a firenena nosy sy tendrombohitra, mifantoka amin'ny tanàn-dehibe sy toerana kely. Io no onenan'i olona maherin'ny 120 tapitrisa ary teraka indray tamin'ny lavenon'ny Ady Lehibe II ho toy ny toby matanjaka ara-toekarena. Nandritra ny 15 taona teo ho eo nitombo haingana ny fizahan-tany Ary raha tsy noho ny areti-mandringana, amin'ity taona ity miaraka amin'ny Lalao Olaimpika, dia ho tapaka ny firaketana an-tsoratra.
Raha mitsidika an'i Tokyo sy Kyoto ny ankamaroan'ny mpandeha, indraindray Osaka, tena firenena mahaliana kokoa izany raha vao miditra ao ianao. Ny fijery voalohany dia tokony ahitana ireo tanàna ireo, ary Nara, Hiroshimao Nagasaki, angamba Sapporo any avaratra, fa raha manam-potoana sy vola ianao na mikatona ka te hiverina dia tonga ny fotoana mamelatra ny sari-tany ary mahita làlana vaovao.
Tsy mamporisika ny handeha ho any Japon aho amin'ny fahavaratra. Nandeha tamin'ny taona 2019 aho ary tena hafanana sy hafanana. Tsy afaka mihetsika ianao raha tsy mamaky hatsembohana. Nandeha tany Okinawa sy Miyakojima aho hankafy ny Karaiba fa na dia amin'ireo nosy ireo aza, miaraka amin'ny ranomasina dia tsy zaka ny hafanana. Tsy lazaina intsony Tokyo. Tsy te handeha ianao fa lanin'ny hafanana.
Ankehitriny, ny fahavaratra dia mety ho a fotoana tsara hahafantarana ny avaratra, Hakodate, Sapporo, toerana toa izany. Mandositra ny diplaoma 30 hafahafa ianao ary miankavanana mankafy ireo sary mahafinaritra indrindra amin'ny farihy. Izany raha tsy mampatahotra anao ny hatsiaka amin'ny ririnina, fa toerana be dia be amin'ny lanezy sy ny fanala izy ireo.
Tokyo Tanàn-dehibe mahafinaritra izy io, mikorontana amin'ny fombany, mangina, madio, azo antoka ary manome tolotra gastronomika sy kolontsaina. Manoro hevitra anao aho hijanona ao amin'ny faritra Shibuya na Shinjuku satria afaka mandeha eo anelanelan'ny manodidina ianao nefa tsy misy olana. Ny tsiambaratelo dia ny tsy hatahorana ho very. Mandeha manodidina an'i Tokyo no tsara indrindra, na dia manana ny Japan Rail Pass. Ity tapakilan'ny fitaterana ity dia mampifamatotra anao amin'ny fiaran-dalamby ary ny marina dia indraindray ny lalamby ambanin'ny tany dia haingana kokoa ary mamela anao hahita ny endrika ambanin'ny tany.
Kyoto tanàna tony sy milamina izy, feno tempoly. Ny akaiky dia Nara, miaraka amin'ny dierany, na Arashiyama miaraka amin'ny ala volotsangana. Raha manohy ora maromaro ianao amin'ny lamasinina bala dia tonga any ianao Hiroshima miaraka amin'ny tranombakoka ary lavitra kokoa, mankany Nagasaki. Nagoya akaiky kokoa an'i Tokyo izy io, ary Osaka Mifaninana mivantana amin'ny habe sy ny fiainana amin'ny alina amin'ny renivohitra. Tsara kokoa ny olona ary ho faly ianao.
Kanazawa Izy io dia manana ny gadon'ilay tanàna sy faritra manodidina samurai tsara tarehy. Enoshima Amoron-dranomasina adiny iray avy eo afovoan'i Tokyo hankafizinao amin'ny lohataona, Takasaki Izy io dia manana ny sarin'i Kannon ary ny famokarana darumas lehibe indrindra ao amin'ny firenena, Kawagoe Tahaka an'i Tokyo taonjato maro lasa izay, ny Tendrombohitra takao tsara tarehy, avy any amin'ny farihin'i Kawaguchico mijery an'i Fidji ianao… dia mitohy ny lisitra. Ny hevitra dia ny mamelatra ny sarintany ary ahantona ny kitapo.
Vidiny? Medium hatramin'ny lafo, fa raha euro na dolara no hitantananao azy dia tsy ho gaga ianao. Ho an'ny Amerikanina Latina dia toerana lafo vidy izy io, eny.
Ny tombony an'ity firenena ity dia izay kely izy io Ary na dia manana ny azy manokana aza ianao dia afaka mahafantatra an'i Seoul na Busan amin'ny dia iray. Seoul Tanàna maoderina toa an'i Tokyo izy io, na dia somary maloto aza ary misy tanàna mahantra kokoa. Tsy mitovy ny tantaran'ny firenena roa tonta ary na dia nitombo be aza i Korea Atsimo dia misy fahasamihafana lehibe kokoa noho ny any Japon.
Seoul dia manana cityscape maoderina fa tsy ho diso fanantenana ianao. Raha hitanao K-fampisehoana tantara sa tianao izy K-popMbola tsara kokoa aza satria ny famokarana audiovisual koreana dia maka sary an-kalamanjana be any ivelany. Doka mpizaha tany tsara, raha manontany ahy ianao. Tsara ny sakafo, be ny fivarotana amoron-dalana, ary manana tranombakoka tsara izy io, ary koa ny funicular izay mitondra anao any amin'ny haavo tsara rehefa milentika ny masoandro.
Azonao atao ihany koa ny mankany Faritra malemy, ny faritra kely eo anelanelan'ireo Koreana roa. Tsarovy fa tsy nifarana ny ady, nisy fiatoana an-keriny izay efa am-polony taona maro lasa izay. Izany no antony ahitanao ireo manamboninahitra amerikana, zavatra tsy tian'ny Koreana maro. Holazaiko fa ny amerikana sasany dia tia azy ireo kely toy ny Japoney ...
Afaka mandray fiaramanidina ianao ary mankany amin'ny Nosy Jeju, tsara tarehy amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona, na dia manampy vola aza izany. Na izany na tsy izany, misy sidina mora vidy ary ny marina dia tsara ho anao ny tsy tsy hahita ilay dia. Avy eo ianao dia afaka mandray ny lamasinina bala mankany Busan, Azo antoka fa tsy hanana zombie toy ny amin'ny sarimihetsika ianao hahafantarana izany tanàna seranan-tsambo izay misy fifandraisana akaiky amin'i Japon mpifanila vodirindrina aminy.
Ny governemanta dia nanambola be tamin'ny fampandrosoana an'i Busan ary noho izany ny fankalazana ny Fetiben'ny sarimihetsika iraisam-pirenena Busan, ao anatin'ity fampiroboroboana ity. Manomboka eto dia afaka miampita mankany Hiroshima, any Japon, ohatra ianao.
Na dia efa nilaza aza isika tamin'ny voalohany fa tontolon'ny tenany i Shina, rehefa mikasa ny hamakivaky ity faritra atsimo atsinanana antsoina hoe Asia Pacific ity isika dia afaka mijanona sy mijanona Shanghai sy Hong Kong. Ireo dia faritra ara-toekarena manokana izay manjaka ny hevitra "rafitra roa, firenena iray", izay nahavita soa tamin'ny toekarena sinoa tato anatin'ny folo taona.
Ireo tanàna roa zanatany vahiny izy ireo nandritra ny taona maro ka ny dian-tongotra Eoropeana dia mbola eo amin'ny maritrano sy ny gastronomy. Izany no mahatonga azy ireo ho tsara tarehy, ary raha jerenao dia samy eo amorontsirak'i Sina izy ireo, akaikin'i Japon na Korea Atsimo.
Shanghai dia ao amin'ny Delta Yangtze River, any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny firenena, eo anelanelan'ny Hong Kong sy Beijing. Ahitana nosy kely sasany ary misy a Toetrandro tropikaly malefaka izay mahatonga azy ho somary mandroaka rehefa fahavaratra. Mbola mandinika bebe kokoa ny isan'ny olona an'arivony tapitrisa monina ao aminy satria io no foibe ara-barotra sy ara-bola any Sina ary iray amin'ireo zava-dehibe indrindra manerantany.
Amin'ny maha mpandeha anao dia tsy afaka mijanona mitety ilay ianao Distrikan'i Pudong, miaraka amin'ireo tranobe mitaingina rihana sy ny Tower Tower Shanghai, sary tsy azo iadian-kevitra. Ianao koa tsy afaka mandao ny Distrikan'i Huangpu, varotra sy fonenana bebe kokoa na an'ny an'ny Xuhui sy ny tranombakoka ao aminy. Ilay tanàna taloha dia mahafinaritra, ilay malaza Bund, amoron'ny renirano. Tanjona ny Jade buddha, ny Zaridaina Yuyuan ary mifoha foana izy Nanjing avenue.
Farany, Hong Kong Tanàna hono izy io kapitalista betsaka noho Shanghai ary ao anaty vaovao hatrany no itakiana demokrasia lehibe kokoa. Hong Kong dia mandrafitra ny nosy Hong Kong, ilay antsoina hoe New Territories sy Kowloon.
Ary koa Toetrandro tropikaly malefaka Ka raha afaka dia aza mandeha amin'ny fahavaratra. Misy hatrany ny mpandeha, misy hatrany ny mpizahatany mitsidika Peak Victoria, Nosy Lantau na ny Avenue of the Stars, ny Escalators. Fa ankoatran'ireny toerana itodiana ireny, ny tanàna mihitsy no tena manintona azy: ny tranony tranobe, ny arabe tery, ny tsena mahaliana sy mora, ny sakafony ...
Volana sy tapany ary mitety faritra sasany any Japon ianao, ny sasany any Korea atsimo ary ny sasany amin'i Sina. Fa arotsaho ny sasany amin'ireo tsara indrindra Firenena Aziatika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Inona no ho hita » Firenena aziatika